Inogona kubhangi dhipoziti here? | Ehupfumi Zvemari
Inogona kubhangi dhipoziti here?
Jose recio | | Deposits, Zvigadzirwa zvemari
Rimwe rematambudziko akakura ane chekuita nekubhadharisa mari yebhangi inyaya yekuti mipiro yemari inogona kudzoreredzwa kana yagadziriswa. Icho chinonzi kunzi kukanzura kwekutanga uye icho chinogona kushandiswa kuburikidza zvishoma kana zvakakwana kubhadharira. Iyi mamiriro anogona kukura nekuda kwekushaikwa kwemari kune iyo chikamu chevabati mune zvimwe zviitiko zvingamuka. Pakati peavo vanoratidzira kuvepo kwechikwereti kune vechitatu mapato, mitero inosungirwa kana chero imwezve accounting inodiwa mudzimba. Kusvika padanho rekudikanwa kuti utorere kune iyo mari kubva kumatemu dhipoziti.
Nguva yekuisa mari ine nguva dzekuchengetedza dzinofanirwa kunyatso cherechedzwa. Vanogona kuve 6, 12, 24 kana kutodarika mwedzi. Asi chii chinoitika kana munguva yekusingaperi vatengi vachida kushandisa mari iyi? Zvakanaka, pakutanga, hakuzovi nesarudzo asi kuongorora kana muchibvumirano kubuda kwemari uku kunotenderwa. Nekuti kwete mune zvese zviitiko mamiriro akafanana anogara achizadzikiswa. Kusvika padanho rekuti inogona kugadzira kusagadzikana kusapfuure kamwe nezve izvo zvaunofanirwa kuita seyekuisa izvo zvauri.
Mukati meichi chiitiko chakazara, chakanyanya kuitika ndechekuti haugone kuita chero kununurwa, kungave zvishoma kana zvachose, uye kusvika kwapera. Icho chokwadi chinogona kuburitsa inopfuura rimwe dambudziko kune vashandisi vebhangi uye izvo zvinogona kunge zvakaitika kwauri pane imwe nguva muhupenyu hwako. Zvisinei, muchinyorwa chino ticha tsanangura zvese zviitiko zvinogona kuitika kuitira kuti iwe ugone kugadzirisa mamiriro aya. Zvisinei kana iwe kana kuti iwe unofanirwa kuwana komisheni kana chirango chechiitiko ichi. Nekuti ichave yakakosha kwazvo kune zvako zvaunofarira kubva zvino zvichienda mberi.
1 Makomisheni pane akachengeta
2 Matanho ekusabhadhara makomisheni
3 Madhipi emhando: hapana rudzikunuro
4 Dzorerazve zvido
5 Zviri nyore here kana kuti kwete kuvashandira?
Makomisheni pane akachengeta
Kazhinji, term deposits inotakura komisheni yekukanzura kudzima uye kuti huwandu hwayo hunowanzo iri pakati pe1% ne3% pane zvido zveichi chigadzirwa chakakosha chebhengi. Zvakanaka, chikamu chakanaka cheizvi zvigadzirwa zvemari zvinosanganisira chirango cheaya maficha kana rumwe rudzi rwe kununura pamipiro yemari. Zvichida zvishoma kana kuti zvachose zvakatarisana nemari yakadyarwa. Nekudaro, iyo inofanirwa kuratidzwa kuti iri chiyero pane chimbadzo chakaunganidzwa nemutero uye kwete pamari yakadyarwa. Iwo mutsauko wakakura waunofanira kufungidzira kana uchizopfuura nemamiriro ezvinhu aya.
Kune rimwe divi, zvakakoshawo zvikuru kuti uzive kuti mhando dzezvirango izvi dzinofanirwa kuverengerwa muchibvumirano chechigadzirwa ichi. Nekuti dai zvainge zvisina kudaro, iwo mabhanga aisakwanisa kukubhadharisa chero mhando yekomisheni sezvo iwe uchikwanisa kuitora ipapo ipapo nekudzoka kwayo kunotevera sezvo kuchinzi ndiko chirevo chinoshungurudza. Kazhinji, mareti emari anosanganisira komisheni yeaya maitiro kuitira kuti uve nemari yakachengetwa kusvika panguva chaiyo yekupera kwayo. Kwako kwaunogamuchira zvipo zvako zvemari pamwe nezvinodiwa zvinoenderana.
Matanho ekusabhadhara makomisheni
Zvisinei, uye kuyedza kutenderedza izvi zvidiki zvemubhadharo zvine mari yemabhangi, iwe une imwe nzira inogona kukubatsira kuti uve nemari iyi. Imwe yacho inosanganisira kunyorera mari ipfupi maererano nehurefu hwekugara. Ndokunge, kune 1, 2 kana kunyangwe 3 mwedzi kuitira kuti iwe ugone kuve mune zvirinani mamiriro mukushomeka kweako yekutarisa account. Hazvishamisi kuti munguva dzino zvakanyanya kuomarara kwauri kuti uve nechimbi chimbi chinoguma newe kuti ubhadhare mari yako. Kugadzirisa mapfupi mafiro ekupedzisira inogara iri mhinduro inoshanda kuti udzivise kuwira muchiitiko ichi chinogona kukuunzira dambudziko rinopfuura rimwe kubva zvino.
Imwe yemaitiro aunenge uripo kuti udzivise iyi mamiriro anosanganisira kusamisa mari yako yese. Kana zvisiri, pane kudaro, zvichave zvakakwana izvo Gadzira chete chikamu chavo. Neiyi nzira, iwe zvirokwazvo haufanire kushandisa dhipoziti yako kana iwe usina yakanaka yakanaka pachiyero chako chekuchengetedza. Mupfungwa iyi, iwe unofanirwa kufunga kuti mari isingatarisirwe inogara ichionekwa gore rega rega. Semuenzaniso, chikoro chevana, kubhadhara kwachiremba wemazino kana kunyangwe chikwereti chisingatarisirwi pamberi pevamwe mapato. Kusvika padanho rekuti inogona kuumba dambudziko rakakomba mumaakaundi ako ega.
Madhipi emhando: hapana rudzikunuro
Nguva dhipoziti inoshambadzirwa pasi pemhando dzakasiyana uye mamwe acho haatenderi kukanzurwa kwekutanga. Izvi ndizvo zvinoitika nemadhipoiti mune imwe mhando mukuti hazvibvumidzwe pasi pechero mamiriro ezvinhu kuti iwe unogona kubvisa mari kare. Iwe unofanirwa kuyeuka kuti iyi kirasi yezvimisikidzo inozivikanwa zvakanyanya nekuti haina kupa varidzi vayo mari mari, sekune rimwe divi zvakajairika. Kana zvisiri, pane kudaro, kutsiva kwavo kunoonekwa kuburikidza nezvipo zvekupa zvipo.
Zvakanaka, kana iwe ukabata kontrakiti chimwe cheizvi zvigadzirwa zvebhangi, hauzove neimwe sarudzo kunze kwekumirira kupera kwayo kuti uve nemari yako yese. Ivo havakutenderi iwe kuti uite chero rudzikunuro, kana kusarura kana kukwana, sezvo zvipo zvavanopa panguva chaiyo iyo iwe yaunyorera chigadzirwa. Ndokunge, pakutanga uye kwete pakukura, sezvinoitika nechikamu chakanaka chenguva inoiswa. Uye zvakare, imwe yezvipingamupinyi zvayo ndeyekuti iri kirasi yezvigadzirwa ine nguva yakareba yekuchengetedza kupfuura mune zvimwe zvigadzirwa. Anotangira pakati pemwedzi gumi nemaviri nemakumi matatu nematanhatu mauri iwe kwaunogona kuita zvachose kana iwe uchida mari. Zviri nyore kuti iwe usazvikanganwe kuti udzivise imwe isingafadzi mamiriro.
Chimwe chezviitiko zvinogona kugadzirwa kubva panguva dzino ndechekuti uri pamberi pechipo, icho chiri kuita, hachifungi nezvemakomisheni kana zvirango zvepfungwa iyi. Asi kwaunenge usina imwe sarudzo kunze kwekutangazve zvido zvako kana ukazvikanzura kare. Kusvika pakuti mamiriro matsva hazvizove zvakakunakira iwe pane zvaunofarira sepakutanga. Nekuti mukuita, mwero wemubereko wavanokupa unogona kudzikiswa kusvika pahafu nekuda kwekuda kwako uku. Kusvika padanho, kuti neimwe nzira, unenge uchitarisana nechigadzirwa chakasiyana chemari pane icho chawakanga wabata pakutanga.
Kune rimwe divi, zvinokurudzirwawo kuti uongorore kana mhando iyi yekumisikidza iri nyore kuti iwe ubhadhare kana kuti zvimwe ivo havasi ivo vanofarira zvakanyanya zvido zvako seyese saver iwe yauri. Mupfungwa iyi, hapana mubvunzo kuti zvinoreva kuti kuderera maererano nerubatsiro urwo mushandisi anogona kuwana. Rimwe boka remadhipatimendi risingazosanganisi makomisheni ndeavo vane mazwi mapfupi, anosvika kumwedzi mitatu ayo anogona kunge asiri pasi pemari inobviswa nevanoibata. Kune vamwe vese, vekusimudzira kana yakabatana nezvimwe zvinhu zvemari ivo vacharamba vachienderera vasina kukwanisa kuita basa remari iri.
Zviri nyore here kana kuti kwete kuvashandira?
Chero zvazvingaitika, mutengi anofanira kuongorora kana zviri nyore kunyorera chinyoreso pasi pemakomisheni aya. Sezvo pakati nepakati purofiti yezvigadzirwa zvemari izvi parizvino 0,12%. Semhedzisiro yesarudzo yeEuropean Central Bank (ECB) kusvika dzikisa mutengo wemari uye izvo zvakatungamira mukufarira panguva ino kuve 0%. Mune mamwe mazwi, pane dzakawandisa nhoroondo, chinhu chiri kukuvadza chaizvo kondirakiti yemhando ipi neipi yemari yekubhangi. Kukuvadza kwemamwe mamodheru ekudyara, senge mari yekudyara iyo inogona kuunza kudzoka kukuru pane kuchengetedza, kunyangwe pasina kuivimbisa chero nguva.
Zvino kana iwe uchida kuita kununura ichave iri nguva yekuongorora kuti sei dhipoziti iyo iwe yawakagadzika nekusimbisa kana zvichibatsira kuita chiito ichi. Nekuti iwe unogona kuona kuti kufarira kuchaenda kuako account yekuchengetedza kuchave kushoma. Zvakafanana nekubvunza kana zvichinyatso kukosha kuisa mari kwenguva yakareba zvakadaro muchigadzirwa chebhengi chehunhu uhu. Nekuti pakupera kwezuva hakugone kuve sarudzo yakanakisa yekuchengetedza yako midziyo. Hazvishamise kuti pachave nema euro mashoma anozoenda kune yako yekutarisa account account.
Kubva nemaonero aya, maakaundi anobhadhara zvakanyanya anogona kuve mhinduro iri nani pane zvaunofarira. Nekuti kunze kwekuvandudza mashandiro, iwe uchagara uine kukwana kwakazara pane iyo mari yauinayo. Pasina chero mhando yemakomisheni kana mari mukutungamira kana kugadzirisa. Neiyi nzira, iwe unenge usina matambudziko ayo madipoziti ari kukukonzera iwe parizvino. Nekuti purofiti yayo yakaderera inosanganiswa nenyaya yekuti icho chigadzirwa chakashanduka zvishoma kwazvo mumakore apfuura. Kusvika padanho rekuti varimari vari kutendeukira kune mamwe maratidziro ekuchengetedza mamodheru ane huwandu hwerupo. Inomiririrwa nedzimwe mhando dzemaakaunzi uye mari yekudyara inoenderana nemari yakatarwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Inogona kubhangi dhipoziti here?
Nzvimbo dzakachengeteka dzekutarisana nemusika wemasheya munguva yedambudziko
Iyo yeSpanish misika yemari pamari yepagore